Honor S1, Huawei अर्को स्मार्टवाच E-Ink स्क्रीन संग Androidsis
Honor S1, Huawei अर्को स्मार्टवाच E-Ink स्क्रीन संग
जोस अल्फोसे | | हाम्रो बारेमा, Smartwatch
एशियाई कम्पनी Huawei अझै यो वर्ष २०१ yet को लागि आफ्नो प्रक्षेपण समाप्त गरेको छैन र यो नयाँ वर्षको साँझको नजिक छ बावजुद, यो नयाँ उत्पादनहरु लाई आरम्भ गर्न को लागी राजी छ। आज त्यहाँ प्रस्तुति हुनेछ Huawei मेट9जस मध्ये हामीले गुगलमा पहिले नै तपाईसँग कुरा गरिसकेका छौं, तर अझै अझै छ।
पोर्टल द्वारा रिपोर्ट गरीएको छ जीएसएम एरेना, Huawei धेरै नयाँ सुविधाहरु को साथ एक नयाँ उपकरण मा महीनहरु को लागी काम गरीरहेको छ। यो Honor S1,aहो गोलाकार डिजाइन स्मार्टवाच र e-मसी प्रदर्शन कि कम्पनी आफ्नो दोस्रो हस्ताक्षर अन्तर्गत जारी गर्नेछ।
Huawei पहनने योग्य वा "पहनने योग्य" उपकरणहरु को लागी नयाँ प्रतिबद्धता Honor S1 कहलाइनेछ र वर्तमान मा बजार मा प्रचुर मात्रामा के गर्न को लागी चाखलाग्दो भिन्नता प्रस्तुत गर्दछ।
पहिलो उत्कृष्ट नवीनता, जे यो पहिल्यै अन्य पहनिन योग्यमा प्रयोग गरीन्छ, यसको पर्दा हुनेछ, जुन प्रयोग गर्दछ इलेक्ट्रोनिक मसी वा E-Ink, यस्तो कुराले पर्याप्त ऊर्जा खपत कम गर्दछ।
यसको डिजाइन पेबल टाइम राउन्डसँग धेरै मिल्दो छ, तर भिन्नताहरू उल्लेखनीय छन्। छविहरूमा देखिने कुराहरूबाट, कुनै पनि प्रकारको शारीरिक बटन लगाएको देखिदैन, त्यसैले यो स्क्रिनमा र स्मार्टफोनमा सम्बन्धित अनुप्रयोग मार्फत प्रबन्धित हुनेछ।
सम्मान S1 पानी र धुलो प्रतिरोधी हुनेछयद्यपि हामी अझै कुन डिग्रीसम्म जान्दैनौं किनकी हामीलाई यो थाहा छैन कि आईपी सर्टिफिकेसनले यसलाई लिनेछ। के फुटेको जानकारीबाट थाहा हुन्छ कि त्यो हो लम्बाई को संख्या ट्र्याक गर्न सक्षम हुनेछ तपाईं पूलमा पौडी खेल्दै हुनुहुन्छ? एकीकृत पनि हुनेछ मुटुको दर सेन्सर.
ठूलो महत्त्वको अर्को पक्ष र जुन हामीलाई अझै थाहा छैन, अपरेटिंग सिस्टम जुन यो एकीकृत हुनेछ, किनकि यो दुबै Android Wear र Tizen सँग आउन सक्छ।
सायद यो Huawei मेट9आज कम्पनीले पनि सबै विवरणहरू प्रकट गर्ने अवसर लिन्छ, त्यसैले हामी धेरै सतर्क रहनुपर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » हाम्रो बारेमा » Honor S1, Huawei अर्को स्मार्टवाच E-Ink स्क्रीन संग
Android ले% 88% मार्केट सेयरको साथ विश्वव्यापी स्मार्टफोन बजारमा प्रभुत्व जमाउँछ
सुपर हीरोजले तपाइँको एन्ड्रोइडलाई DC लेजेन्डहरू अब उपलब्ध संग कब्जा गर्दछ